Wenezdee 2 Juun 2021
Ụlọ Ime Ụlọ Nke a bụ ụlọ iji gosipụta obibi ndụ pụrụ iche nke nnabata, nke bụ ihe ndị na-ese ihe na ụlọ nke onye ọchụnta ego. Onye rụrụ ya na-ewepụta ihe ndị sitere n'okike iji gosipụta ihe onye ọbịa chọrọ ma chekwaa oghere iji mejupụta ihe onye otu ezinụlọ. Thelọ ekwu ahụ bụ etiti ụlọ, ihe pụrụ iche haziri maka onye ọbịa ma jide n'aka na ndị nne na nna ga-ahụ ebe ọ bụla. Equippedlọ ahụ nwere ebe a na-ete akwa na-acha ọcha na-acha ọcha, eserese ịnweta ,tali, iko na-enweghị atụ, na mkpuchi ọcha iji mee ka a mata nkọwa ndị mara mma.
Tiuzdee 1 Juun 2021
Ụlọ Ime Ụlọ Stylelọ ụlọ mmepụta ihe nwere ihe ọkụ. Thislọ a na-akwado ọtụtụ ọrụ maka ndị ahịa iji bulie ogo ndụ. Onye rụrụ ya nwara ijikọ ọkpọkọ ndị ahụ na oghere ọ bụla yana osisi, igwe na ọkpọkọ ENT iji kọwaa akụkọ ndụ ndị ahịa. Ọ bụghị otu ụdị ụlọ ọrụ nkịtị, ntinye ụlọ a nwere naanị agba ole na ole ma na-akwadebe ọtụtụ ohere nchekwa.
Mọnde 31 Mee 2021
Stool Enwere ike iji akwa Ydin kwọọ elu gị, na-ejighị ngwaọrụ pụrụ iche, ekele maka usoro ntanetị dị mfe. A na-edobe ụkwụ anọ dị niche na enweghị usoro ọ bụla, oche a na-ahụ anya, na-arụ ọrụ dị ka nke bụ isi, na-edobe ihe niile. Ejiri osisi na - esite na steepụ eme ihe nwere ụkwụ, jiri ya rụọ ọrụ ngwa ngwa site na iji usoro ịkpụzi ọdịnala ma mesịa tee mmanụ. A na-akpụzi oche ahụ n'ụdị UHP ihe na-adịgide adịgide. Naanị ngalaba ise ga-ewepụrịrị ma dịrị njikere ibufe ndị ahịa ikpeazụ, bụ arụmụka nkwado ọzọ.
Mbọsị Ụka 30 Mee 2021
Satọdee 29 Mee 2021
Fraịdee 28 Mee 2021
Simplest Happiness Usoro Ihe Nkiri Azụmahịa Satọdee 18 Septemba
Chirming Akwụkwọ Mmado Fraịdee 17 Septemba
Santander World Ihe Eji Eme Ihe N’Obodo Tọọzdee 16 Septemba
Ụlọ Ime Ụlọ Ụlọ Ime Ụlọ Stool Ngwongwo Chiiz Chiiz Troule Ọzara Chiri Akpọrọ Ọrụ Ọ Drinkụ Drinkụ Na-Ekpo Ọkụ Na Ahịhịa Ọhụrụ